Miinada dhulka lagu aaso oo ugu yaraan todobo qof ku dishay duleedka Muqdisho - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaMiinada dhulka lagu aaso oo ugu yaraan todobo qof ku dishay duleedka Muqdisho
Miinada dhulka lagu aaso oo ugu yaraan todobo qof ku dishay duleedka Muqdisho.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Ugu yaraan todobo qof ayaa ku dhimatay maanta oo Axad ah kadib markii miinada dhulka lagu aaso ay ku qaraxday, sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Bumbada ayaa ku qaraxday gaari bas ah oo siday dumar beeralay ah, iyaga oo marayay tuulada Daniga oo 40 km qiyaastii dhanka waqooyi galbeed kaga beegan Muqdisho.
Gaariga ayaa siday ku dhawaad 10 qof waxaana uu ka tagay magaalada Afgooye, sida ay ilo-wareedyadu sheegeen.
Meesha qaraxu ka dhacay ayaa ku dhow deegaano ay ku xoooganyihiin maleeshiyada Al-Shabaab.
July 18, 2017 Baarlamaanka Puntland oo diyaarinaya mooshin ka dhan ah golaha wasiiradda
July 4, 2017 Dooxada Dharoor ee gobolka Bari oo dib loo furay kadib 40 beri oo ay xirnayd
June 8, 2017 Ugu yaraan 25 askari oo ciidamada Puntland ah oo lagu dilay weerar ay Al-Shabab ku qaadeen saldhig ciidan oo kuyaala Buuraha Galgala
Wasiirka Amniga Soomaaliya oo sheegay in dowladdu ay soo bandhigi doonto faahfaahinta qaraxii Muqdisho
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somali Prime Minister Hassan Ali Khayre has appointed Ahmed Mursal Sheikh Abdirahman as defence minister, state-owned SONNA news agency reported on Sunday, citing information minister Abdirahman Omar Osman. The PM also sacked the [...]
Ugu yaraan labo qof oo shacab ah oo ku dhimatay weerar ka dhacay bar-koontarool oo kuyaala magaalada Boosaaso
Boosaaso-(Puntland Mirror) Dablay hubaysan oo aan haybtooda la aqoon ayaa weerartay bar-koontarool oo kuyaala gudaha magaalo xeebeedka Boosaaso ee gobolka Bari, waxaana lagu dilay ugu yaraan 2 qof oo shacab ah sidoo kalena waxaa ku [...]